Evernote na-agbakwụnye ihe aga-eme na ndetu ama gị ama ama wee siwanye ụba arụ ọrụ | Esi m mac
Toni Cortes | 04/06/2021 22:00 | Ngwa ndị ọzọ maka Mac
Ngwa a ma ama Evernote Ọ ga - akwụsị ịbụ naanị ngwa iji jikwaa ndetu, ya na ya, ị nwekwara ike ijikwa ọrụ gị, si otu a na - abawanye ọrụ gị mgbe ị na - achịkwa ọrụ ị na - arụ kwa ụbọchị na ebe ọrụ, yana gịnị kpatara, na ndị ọrụ nzuzo , ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eji ọrụ n’aka.
Mgbasawanye ọrụ a amalitebeghị ịrụ ọrụ, dịka ekwuputara ya taa, ma ga-eji nwayọọ nwayọọ tinye n'ọrụ na izu ndị na-abịanụ. Ya mere ị mara, na ụbọchị ole na ole Evernote ga-abụ Ọrụ Evernote....
Karịrị afọ iri na e mepụtara ụdị mbụ nke Evernote, ọ ghọwokwa otu ngwa kachasị ewu ewu iji mepụta ma jikwaa ndetu na ngwaọrụ gị, ma ọ bụ na kọmputa, mbadamba na smartphones nke ikpo okwu ọ bụla.
Na nke ya blog onye ọrụ gọọmentị, ọ ka bipụtara na n'oge na-adịghị anya njikwa ọrụ ndetu a ga-agbasa, ị ga-enwe ike ịme otu ihe ahụ, mana yana ọrụ. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike itinye oge ruru, ihe ngosi, ihe ncheta, akara ngosi, wdg. Na ndetu gị.
Ihe edeturu ibu oru
Ugbu a beta mbụ na ọrụ ọhụrụ ndị a ka emepere, a na-atụ anya na n'ime izu ole na ole mmelite maka ndị ọrụ niile ga-arụ ọrụ zuru oke. Ndị a bụ akụkọ na Evernote Task na-enye anyị:
Ebuli workflows. Mgbe ndetu na ọrụ na-ebikọ ọnụ, ọ dịghị mkpa ikpebi ihe ga-eme na ndetu n'ihu onye njikwa ọrụ ma ọ bụ ndepụta ihe a ga-eme.
Hụ ihe ị ga-eme kwa ụbọchị na ihe kpatara ya.
Debe oge ma gbakwunye ihe ncheta ka ọrụ ndị kwesịrị ekwesị gosipụta n'oge kwesịrị ekwesị.
Jiri ihe ngosi iji gbochie ọrụ ị ga-efu na ngwakọta kwa ụbọchị, ọbụlagodi mgbe anaghị eji Evernote.
Chọpụta ihe dị mkpa ka mbọ wee nwee ike lekwasị anya n’ihe kacha mkpa.
Nweta nchịkọta dị iche iche banyere ọrụ ọ bụla na-echere, ma ọ bụ nyocha maka ihe omume zuru ezu.
Na-arụ ọrụ gị ụzọ. Ezubere iji nweta ụdị ọrụ pụrụ iche, ndị ọrụ nwere ike ịhazi ọrụ site na ndetu, ụbọchị ruru, ma ọ bụ akara akara, ma jiri nzacha iji hụ ozi niile.
Ga-enwe mgbanwe ọ bụla emere na arụ ọrụ emelitere ozugbo na nlele ọ bụla na ngwaọrụ ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa ndị ọzọ maka Mac » Evernote na-agbakwụnye ihe aga-eme na ndetu gị ama ama wee siwanye arụmọrụ
Ndị ọrụ Apple ga-alaghachi n'ọfịs na Septemba
Apple weghachite Apple Music maka ebe nrụọrụ weebụ Artists